विदेशमा काम गर्न गएर उतै ज्यान गुमाएका मानिसका छोराछोरीले छात्रवृत्ति पाउनको लागि के गर्नुपर्ला?
Thu, Feb 22, 2018 | 12:19:47 NST
11:02 AM (8 months ago)
नाम ठेगाना उल्लेख नगरेको
प्रश्नः विदेशमा काम गर्न गएर उतै ज्यान गुमाएका मानिसका छोराछोरीले छात्रवृत्ति पाउँछन् भनेको रेडियोमा सुनेको थिएा। त्यसका लागि के गर्नुपर्ला ?
उत्तरः बेनामे साथी, विदेशमा मृत्यु भएकाका छोराछोरी वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट छात्रवृत्ति पाउँछन्। त्यसका लागि विदेशमा अभिभावकको मृत्यु भएको हो भन्ने प्रमाणपत्र सहित उनका छोराछोरीले पढ्ने विद्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ। विद्यालयले छात्रवृत्तिका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवदेन पठाउँछ। त्यो निवेदन शिक्षा कार्यालयले बोर्डमा पठाउँछ। सोहि निवेदनको आधारमा बोर्डले कम्तीमा आठ हजार देखि १२ हजार रुपैयाँ छात्रवृत्ति प्रदान गर्छ। कक्षा १२ सम्म पढ्ने छोराछोरीले छात्रवृत्ति पाउँछन्।
रियाल, दिर्हाम, दिनार र रिंगिटको मूल्य बढ्यो
काठमाडौं, फागुन १० – नेपाल राष्ट्र बैंकले आज तोकेको विनिमय दर अनुसार एक साउदी रियालको खरिददर २७ रुपैयाँ ५५ पैसा र विक्रिदर २७ रुपैयाँ ७१ पैसा रहेको छ ।